China EV charger bateria 6.6KW amin'ny charger board dia mamaly haingana ny famokarana 30a 50a 60a 90a | Lingxiang
Mpamaritra indostrialy-DC 12V-600V
EV bateria charger 6.6KW amin'ny charger board dia mamaly haingana 30a 50a 60a 90a
Ny lozisialy fanodinana famerenam-bidy feno tanteraka dia natao manokana amin'ny famoahana bateria misy herinaratra avo lenta an'ny fiara vaovao. Ny famatsiana herinaratra dia mandray ny endriny vita amin'ny rivotra ary ampifandraisina amin'ireo mpanamboatra famatsiana herinaratra mandroso iraisam-pirenena. Izy io dia iray amin'ireo vokatra avo lenta avo lenta an'izao tontolo izao, ary ny famantarana ny fahombiazany dia nahatratra ny mpifaninana iraisam-pirenena. Haavo, lava kokoa ny fotoana fandehanana tsy misy olana, ity andiana famatsiana herinaratra ity dia azo ampiharina amin'ny sehatra samihafa izay mitaky herinaratra tsy tapaka sy famatsian-jiro tsy tapaka ankehitriny.
1. Ny voltage input dia manerana izao rehetra izao, ary ny volavolan'ny endriny dia AC96V-264V; dia mety amin'ny haavon'ny herinaratra any amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao;
2. Anton-kery lehibe, ny input AC dia mandray ny fanitsiana ny hery miasa (APFC), ny hafanana dia kely ary ny fahalotoana aotra amin'ny tariby misy herinaratra dia azo tanterahina;
3. Teknolojia famenoana lakaoly mihidy tanteraka, ny charger dia mampiasa lakaoly mihidy tanteraka mameno ny teknolojia gel silika mafana, fiarovana kilasy IP66, fanoherana tohina tsara, fahombiazan'ny fanaparitahana hafanana tsara sy androm-piainana maharitra;
4. Ny fiolahana famandrihana mavitrika dia miaraka amina sehatr'asa solosaina, ary ny fomba famahana dia azo ahitsy eo an-toerana. Mety amin'ny karazana bateria lithium rehetra. Miaraka amin'ny sehatry ny fifandraisana CAN, dia afaka mahatsapa ny fifandraisana amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny BMS miaraka amin'ny bus CAN;
5. Fahombiazana avo lenta, tsy tantera-drano, tsy mahazaka, zavona asidra, volavolan-tany mitokana vovoka ary nohamafisina, mahatonga azy io ho azo antoka hiasa amin'ny tontolo iainana;
6. fahamendrehana avo, maripana maripana maripana miasa: -40 ℃ - + 60 ℃. Fitsapana fahanterana feno 100% feno, teknolojia fanodinana malefaka; fihenan'ny fitaovana elektrika kely ambany, fahombiazana avo lenta (-93%), fitsitsiana angovo ary fitehirizana herinaratra.
Anarana EV bateria charger 6.6KW amin'ny charger board dia mamaly haingana 30a 50a 60a 90a
Size 420 * 295 * 113mm
: ip IP66 （Tsy tantera-drano, tsy misy vovoka, porofo mipoaka, tsy mahazaka）
Fampidirana ankehitriny 32A
Fotoana famakiana Kajy ny fotoana famerana miankina amin'ny fahaizan'ny bateria
Herin'ny famoahana 6600W
Omeo vahaolana momba ny bateria matihanina hatramin'ny 1999.
Teo aloha: EV bateria charger 6.6KW amin'ny charger board dia mamaly haingana 30a 50a 60a 90a
Manaraka: Ao amin'ny charger 48v 72v 96v 144v 144v charger bateria lithium bateria sy charger bateria
Sichuan Lingxiang Technology Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta mampiditra R&D, famokarana, varotra ary serivisy. Ny orinasa dia miompana amin'ny fampivoarana sy famokarana fitaovana famahana angovo vaovao.
Faritra A, tranobe 4 No. 200 amin'ny làlana fahadimy Tianfu.Chengdu Zona teknolojia avo lenta